Waqtigee ugu wanaagsan cabista bunka ama kafeega? (Talada dhakhaatiirta) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Waqtigee ugu wanaagsan cabista bunka ama kafeega? (Talada dhakhaatiirta)
(Hadalsame) 22 Nof 2021 – Dad badan ayaa caado ay u tahay in isla marka ay hurdada ka kacaan indhaha ku kala furan koob bun ah, waayo waxa ay aaminsan yahay in koobkani uu ka caawinayo firfircoonaynta jidhka.
Bunka in badan ayaa ay khubarada caafimaadku siyaabo aad u kala fog uga warramaan waxtarkiisa ama waxyeelladiisa caafimaad. Cilmibaadhistan soo socota ayaa ka jawaabaysa, su’aasha in badani isweydiin karto ee ah, “Waqtigee ugu fiican cabitaanka bunka”
Digniin: Khubarada caafimaadku waxa ay ka digeen in bunka/kafeega la cabo hurdada ka hor, waayo maadadda Caffeine ee ku jirtaa waa kiciye ka hortaga hurdada taas oo aanu macnuhu ahayn in maadaddani gama’a uun qofka ka hor istaagayso, balse sidoo kale marka uu gam’o waa ay u diidaysaa in uu hurdo xeeldheer seexda.
Previous articleDokumentiyo la dusiyey oo muujinaya sida ay Dowladda Kenya u beegsanayso shirkadaha Soomaalida (Arag dokumentiyada)
Next articleSweden oo dumarka ka joojin karta shaqo ay haatan qabtaan & muran ka taagan (Dhegeyso)